Manomana ny hoho ho lava sy matevina tsara, hiatrika ny fety…
Ho avy izao ny fety ka mba te hanana hoho lavalava sy maniry tsara ianao. Tianao ihany koa raha mba matevina tsara izy ireo ka tsy voatery hanao “faux ongles” intsony fa avy dia ny hohonao mihitsy no hiangaliana an’ireny karazana fanaingoana hoho na “nail’s art” ireny. Mbola tsy tara ianao raha izao dia efa manomana ny hoho hiatrika ny fety. Ireto ny torohevitra …
Ny fahazarana atao
Mba haniry tsara ny hohonao, dia mila kolokoloina tsara ny keratina izay mandrafitra azy ao anatiny. Fepetra takiana voalohany ny fanamandinana ny hoho ! Isan’andro, dia ory moramora ny tampon-koho sy ireo hoditra manify kely manamorona azy. Menaka avy amin’ny zava-maniry toy ny « huile d’amande douce » na menaka oliva no tsara indrindra satria mandaitra haingana be. Atao maraina sy hariva.
Ankoatra an’io fahazarana voalohany io dia ataovy ihany koa ity manaraka ity, mba hahazoana hoho salama, maniry vetivety ary matevina tsy mora misilaka. Afangaroy ao anaty vilia kely ary ny « huile d’amande douce » sy ny ranona antsasaka voasarimakirana. Lomy ao ny hohonao avy eo mandritra ny roa minitra. Somary orina sady tsindriana malefaka ihany koa. Mandrisika ny rà any ambanin’ny hoho sy manodidina azy hiasa tsara izany. Kobanina avy eo. Tsy vitan’iretsy voatanisa iretsy fa ho botsiaka mahafatifaty ery koa izy ireo avy eo. Atao isaky ny roa andro.
Isa-kerinandro kosa indray dia manao fikoloana feno mihitsy. Ahitsy amin’ny « lime » ny hoho mba hirafitra tsara sady hanamafy azy izany. Avy any amin’ny sisiny no mankeo afovoany no fanao azy. Hosorana “vernis base” izany avy eo, ka ireo “durcisseur” izay manamafy hoho izao no tena ilaina. Tsy adino ny fampiasana “vernis” ara-dalàna tsy manimba hoho, sy ny “dissolvant” izay tsy misy “acetone” maherisetra ho an’ny hoho.
Mikaonty koa ny sakafo
Mety hahagaga anao kanefa tena mikaonty betsaka amin’ny kalitaon’ny hoho ihany koa ny fomba fisakafoana. Fantaro àry fa raha manana olana amin’ny hoho ianao, dia tokony hihinana betsaka an’ireo sakafo be proteina toy ny hena, ny trondro, ny atody, ny voamaina… izay ilain’ilay keratina ao anaty hoho. Toy izany koa ny sakafo vory kalsioma, zinc, vitamina, … izay mandrisika ny vatana fanirian’ny hoho sy ny fihatsaran’ny kalitaony. Raha tena efa lasa lavitra kosa ny olana eo amin’ny hoho dia azo atao koa ny mihinana fanampin-tsakafo manatsara ny fanirin’izy ireo.